Ntụgharị uche mkparịta ụka Kisima nkeji nkeji - CAPSI
Ọ bụla afọ nke inwe ihe ịga nke ọma na ibipụta akụkọ inye na mgbanwe sitere n'ofe Africa. Nke Kisima African inye Platform na-aga n'ihu na-arụsi ọrụ ike ruo n'iwu ya nke ịdekọ ezigbo akụkọ na ịmepụta mkparịta ụka enyemaka ohere.
Kisima pụtara 'olulu mmiri' na Kiswahili, nkọwa zuru oke nke ihe ikpo okwu na-achọ inweta, na ịbụ ihe na-akpali akpali. Atumatu a bu n'obi ime ka akuko gbadoro anya na Afrika na-eme mgbanwe n'ime obodo ha n'ofe kọntinent na site n'uzo di iche iche iji weghara ozi ahu.
Na 28th nke Eprel 2022, Kisima Platform kwadoro nkeji mbụ nke ya Mkparịta ụka Kisima Quarterly. E mere mgbakọ ahụ n'isi isiokwu bụ́ “Inye Na-enwe Mmetụta, Ihe Mere na Emeghị Eme” Mkparịta ụka a bụ nzụkọ ngwakọ nke nyere ohere maka ndị nwere mmasị na ndị nwere mmasị na ohere enyemaka iji kpakọrịta.
N'ịkwado site na Pọtụfoliyo onye ndu Mapaseka Mokwele, nkeji nkeji a nke mkparịta ụka ahụ hụrụ mmalite nke Kisima Giving mobile ngwa yana nyekwa ohere iji gbanwee ndị na-emepụta ka ha kesaa akụkọ ha n'ime omimi ka ukwuu. N'isi okwu mkparịta ụka dị ka onye isi okwu bụ Chancellor nke Mahadum Witwatersrand na onye na-ahụ maka ọdịmma mmadụ, Dr Judy Dlamini. Ndị ọkà okwu gụnyekwara onye isi CAPSI, Dr Bhekinkosi Moyo, Onye isi mmemme na TrustAfrica na Kisima Partner na onye nkwado, Briggs Bomba na CAPSI Program Manager, Thandi Makhubele.
Mkparịta ụka ahụ gosipụtara ụfọdụ akụkọ ndị e gosipụtara na webụsaịtị Kisima. Ndị a bụ Imbokodo Launch Pad nke Jazzman Simalane duziri (bụkwa ndị mmeri nke Aspire Higher Asọmpi), Obodo mmepe nke Kitso Lesedi Maki Tselapedi na-edu na Ntọala ụmụaka nwere obi ike Musasa nwere obi ike na-edu. Ndị isi otu ndị a na-akọ akụkọ gbasara ihe otu ha na-ekwu, mana nke kachasị mkpa bụ 'ihe kpatara' ji eme ya niile. A sị ka e kwuwe, Kisima bụ ebe a na-edebe akụkọ ndị Africa na-eto eto.
Enwere isi ihe ole na ole nke ụbọchị ahụ Bhekinkosi Moyo gosipụtara, nke mbụ bụ mmalite nke ụbọchị ahụ. Ibe Nhọpụta akụkọ n'elu ikpo okwu. Nke a bụ ọrụ na-enye onye ọ bụla nọ na kọntinent ahụ ohere ịhọrọ ihe kpatara, mmadụ, ma ọ bụ nhazi nke nhọrọ ha chere na ọ dị mkpa ka Kisima African Giving Platform kwadoro ya.
Kisima African inye Platform bu n'obi ime ka inye ihe dị mfe. Isi ihe ọzọ ewepụrụ bụ ka ikpo okwu siri mepụta ọwa dị iche iche maka mmadụ inye onyinye, gụnyere nhọrọ mbufe blockchain ọhụrụ na nke ọhụrụ. Platform na-enyekwa ntụgharị asụsụ site na bekee gaa na asụsụ iri na atọ a na-asụ n'ọtụtụ ebe na kọntinent ahụ iji mee ka ọ dị. Kisima n'ezie bu olulu mmiri nke na-enye ihe.